Nyeinlatt.com: အဖြူရောင်သံစဉ် Online Radio ကို iPhone ပေါ်မှာ နားဆင်ချင်ရင်
အဖြူရောင်သံစဉ် Online Radio ကို iPhone ပေါ်မှာ နားဆင်ချင်ရင်
တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်မှု့တွေကို ပြေပျောက်စေဖို့အတွက် online ကနေနှစ်သက်ရာ တေးသီချင်းများကို 24 hours ထုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ အဖြူရောင်သံစဉ် online ရေဒီယိုကို iPhone ပေါ်မှာ နားထောင်လို့ ရအောင် အဖြူရောင်သံစဉ် မိသားစုမှ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
App store မှ Fstream app လေးကိုအသုံးပြု ထားပါတယ်။
သင်၏ iphone ပေါ်တွင် App Store ကိုဖွင့်ပါ.. ပြီးလျှင် Search ကိုနှိပ်ပါ...Search Box တွင် fstream ဟုရေးပြီး Search လုပ်ပါ။ ရလဒ် စာမျက်နှာတွင် Fstream ပေါ်လာပါမည်။ Free ကိုနှိပ်ပါ ထိုနောက် Install ကိုနှိပ်၍ Install လုပ်ပါ။
Fstream app ကိုဖွင့်ပါ။
Favorite ကို နိုပ်ပါ။
Edit ကို နိုပ်ပါ။
Add new webradio ကိုရွေးပေးပါ။
Name : APYTZ
URL : mms://89.238.146.148/APYTZ
URL : mms://wma2.viastreaming.net/APYTZ
Encoding ကို WindowsLatin1 ဟုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် Save ကို နိုပ်ပါ။
5. APYTZ ဆိုတဲ့ Radio channel လေး iPhone ပေါ်မှာတွေ့ရမှာပါ။ Done ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
ကဲ.. ဒါဆိုပြီးသွားပါပြီ။ iPhone ရဲ့ အောက်ခြေ bar မှာ Play ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Scream ပေါ်မှာ APYTZ ကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
The way to listen APYTZ radio on iPhone (Video File)
မှတ်ချက် ။ ။ 3G Network နှင့် နားဆင်သူများသည် Fstream မှ Cellular Network ကို On ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Fstream > More > Setting > Cellular Network (On )
ကိုးကား ။ ။ http://www.apytz.net/
Posted by Nyein Latt at 4:45 AM
ှSamsung ဖုန်းတွေအတွက်ရောဘယ်လိုမိူး သီချင်းတွေနားထောင်လို့ရမလဲ သူငယ်ချင်းတို့လေး နားထောင်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကူညီပေါ့နော်. ကျေးဇူးပါနော်.